Antsiranana: nosalorana samboady ireo depioten’i Diana | NewsMada
Antsiranana: nosalorana samboady ireo depioten’i Diana
Notanterahina ny faran’ny herinandro teo tao amin’ny Place Ritz eto Antsiranana ny lanonana fametrahana ny samboadin’ireo solombavam-bahoaka voafidy tato amin’ny faritra Diana. Miisa enina mianadahy izy ireo izao napetraka amin’ny fomba ofisialy amin’ny maha olom-boafidy azy izao. Anisan’izany ireo roa voafidy tao Antsiranana I, sy iray avy voafidy tao Antsiranana II, Ambilobe, Ambanja ary Nosy-Be.
Tonga nanatanteraka izany tany an-toerana ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine. Nanotrona izany ny minisitry ny Atitany Razafimahefa Tianarivelo sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, miaraka amin’ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy.
Hitohy any amin’ny faritra hafa ny hetsika fametrahana samboady ireo depiote voafidy farany teo, iarahana amin’ny filohan’ny Antenimierampirenena. Efa nahavita ny azy kosa ny any amin’ny faritra hafa, toy ny tany Atsimo Atsinanana sy ny tany amin’ny faritra Sofia.